राजकुमार सिग्देल/फणिन्द्र नेपाल (चितवन)नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले महामन्त्री वा सोभन्दा माथिको पदमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । नवौं महाधिवेशनमा ईश्वर पोख्रेलसँग ६ भोटले महासचिवमा हारेका पाण्डेले योभन्दा तल उम्मेदवारी नदिने रातोपाटीलाई बताए ।विगतमा माधव नेपाल समूहमा रहे पनि एकीकृत समाजवादीमा नलागी एमालेमै रहेका पाण्डे ‘१० भाइ समूह’का नेतासमेत हुन् । तर, अहिले प्यानल बनाउन नपाउने भनिएकाले १० भाइका तर्फबाट सामुहिक उम्मेदवारी घोषणा गर्ने स्थिति छैन । त्यसै
बाँदरझुलाबासीको पीडा : भोट माग्दा आश्वासन दिन्छन्, जितेपछि लालपूर्जा दिँदैनन् (भिडियो)
नयाँ पत्रिका 28 दिन पहिले
तीन हजार भोट गन्दा मुकेश काफ्लेलाई लज्जाजनक भोट !
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यका लागि खुलातर्फ उम्मेदवारी दिएका डा. मुकेशराज काफ्लेले अत्यन्त लज्जास्पद भोट प्राप्त गरेका छन् । आइतवार दिउँसो सवा ३ बजेसम्म २ हजार ९९३ भोट गणना हुँदा काफ्लेले मात्र २८९ भोट पाएका छन् । सबभन्दा धेरै डा. शशांक कोइरालाले दुई हजार ४४२ मत पाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रहेका काफ्लेले नेपालबाट लोडसेडिङ अन्त्य भए कुनै सार्वजनिक पद धारण नगर्ने बताएका थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आउनुपूर्व काफ्ले कार्यकारी थिए । उनी पुल्चोक इन्जिनियरिङ...
देउवाले हाले भोट
काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अहिले भइरहेको मतदानमा वर्तमान पार्टी सभापती शेरबहादुर देउवाले भोट हालेका छन्। प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको मतदान केन्द्रमा पुगेर देउवाले केहीबेर अघि भोट हालेका हुन्। देउवा नयाँ नेतृत्वमा पनि पार्टी सभापतिका उम्मेदवार हुन्। काठमाडौँको प्रदर्शनीमार्गस्थित तीनवटा मतदान स्थलमा एकसाथ मतदान भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभा गृह, भृकुटी मन्डपको मैदान […]
कुरा प्रविधिका, भोट भने ट्याङ्कीमा !
काठमाण्डाै - भृकुटीमण्डपको बारमा रहेको दुई वटा डिजिटल डिस्प्ले मध्ये एउटामा गगन थापाले भोट माग्दै गरेको देखिन्छ । उहाँ आफूले काठमाण्डौ ४ नं क्षेत्रमा गरेको विकासको फेहरिस्त डिजिटल डिस्प्लेमा देखाएर थाक्नु भएको छैन । उहाँजस्तै अरु उम्मेदवारले पनि यसैगरी डिजिटल डिस्प्लेबाट मत मागेका छन् । भोट माग्न सबै नेताले फेसबुक, युट्युब तथा ट्वीटरको उपयोग गरेका छन् । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा कांग्रेसको एप पनि सार्वजनिक गरियो । नेताहरु स्वयम् २१ औँ शताब्दीमा प्रविधिको अत्याधिक उपयोग गर्नुपर्छ भनेर थाक्दैनन्। तर मतदान गर्ने ...
कांग्रेस प्रतिनिधिहरुलाई डटपेन बाँड्दै, भोट माग्दै
२७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केही उम्मेदवारहरुले प्रतिनिधिहरुलाई डटपेन उपहार दिंदै भोट मागेको पाइएको छ । केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार राजेन्द्र बजगाइँले डटपेन र कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुख आकृतिको प्रचार सामाग्री बाँड्दै भोट मागेका हुन् । उनी पनि अन्य उम्मेदवारहरू जस्तै मतदानका लागि लाइनमा उभिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई लाइनमा पुगेर भोट मागिरहेका छन् । सभापतिका उम्मेदवारहरु […]
भीम रावललगायतका उम्मेदवारहरुलाई भोट नहाल्न भन्दै पर्चा बाँडेको भेटियो
काठमाण्डाै - नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भइरहेको चुनावमा अध्यक्षका प्रत्यासी भीम रावललगायतका उम्मेदवारहरूलाई भोट नहाल्न भन्दै पर्चा बाँडेको भेटिएको छ। चुनावमा कसलाई भोट हाल्ने र कसलाई नहाल्ने भन्ने पर्चा बाँडिएको भेटिएको हो । पर्चामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेका पदाधिकारी एवम् सदस्यलाई भोट हाल्न भनिएको छ भने त्यसबाहेकका उम्मेदवारलाई नहाल्न भनिएको छ । अध्यक्षमा भीम रावल, उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसाल र सचिवमा टङ्क कार्की र भीम आचार्यलाई भोट नहाल्न पर्चामा भनिएको छ।
भोट माग्न भरतमणि पौडेल पुगे ताप्लेजुङ
काठमाडौं : 'कमेडी च्यापियन सिजन ' प्रतिस्पर्धी भरतमणी पौडेल भोट माग्न ताप्लेजुङ पुगेका छन्। गृह जिल्ला पुगेका पौडेललाई ताप्लेजुङका स्थानीयले नौमती बाजा, च्याब्रुङ नाचसहित भव्य स्वागत गरेका छन्। ताप्लेजुङ पुगेर उनले प्रतियोगितामा जिताउन आफूलाई भोट गर्न आह्वान गरेका छन्। स्थानीय युवाहरुले बाइक र्‍याली निकाल्दै उनको लागि भोटको अपिल समेत गरेका…
झापामा गुन्जियो ‘भोट फर भरतमणि’ नारा
कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियनका २’मा पछिल्लो समय पूर्व युवराज पारस शाहको क्यारिकेचर गरेर सबैको मनमा बस्न सफल फाइनललिस्ट प्रतियोगी भरतमणि पौडेलको पक्षमा झापाको सडकमा ‘भोट फर भरतमणि’ नारा गुन्जिएको छ । सोमबार बिहान झापाको भद्रपुरदेखि बिर्तामोडसम्म उनलाई भोट माग्दै मोटरसाइकल र्‍पालीसहित समर्थकले ‘भोट फर भरतमणि’ नारा गुन्जाएका हुन् । भरतमणि सहभागी र्यालीमा हजारौ समर्थक मोटर साइकलसहित सहभागी थिए । र्‍यालीमा भरतमणिलाई ‘कमेडी च्याम्पियन २’ क
नो भ्याक्सिनेसन, नो भोट!
भोट हाल्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार हो भन्दै गर्दा कानुनी सिद्धान्त अनुसार सामूहिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारमाथि हाबी हुन्छ भन्ने बिर्सिनु हुँदैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले राप्रपा अध्यक्ष थापालाई फोन गरेर बादललाई भोट मागे
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई फोन गरेर राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा एमाले उम्दवारलाई भोट मागेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आज फोन गरेर राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा एमालेको उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई भोट दिन आग्रह गरेका गरेका बताइएको छ। हिजो राप्रपाले एमालेले आग्रह गरे आफूहरु बादललाई भोट दिन तयार रहेको बताएको थियो।